प्रचण्ड–नेपाल समिकरणले केन्द्र सरकारमा हलचल आउनसक्ने,अब के प्रचण्डले दिमाग लगाएर ओलीलाई खेद्लान? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रचण्ड–नेपाल समिकरणले केन्द्र सरकारमा हलचल आउनसक्ने,अब के प्रचण्डले दिमाग लगाएर ओलीलाई खेद्लान?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको समिकरणको नतिजा कर्णाली प्रदेशबाट देखिन थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्ड पक्षीय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरलाई पेलेर जाने नीति लिएका छन् । उनले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरी नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरुलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
ओली पक्षधका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ माहोल तयार भएको हो । कर्णालीको गठबन्धनमा यसअघि ओली
र नेपाल पक्ष मिलेर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा नेपाल पक्ष शाहीतर्फ लागेका थिए । त्यसपछि सचेतकसहित नेपाल समूहले तीन मन्त्री पाउने सहमति बनेको थियो । नेपाल पक्षका कुर्मराज शाही सचेतक नियुक्त भइसकेका छन् ।
सहमति अनुसार नेपाल पक्षका चन्द्रबहादुर शाही करबिर शाही र अमरबहादुर थापा मन्त्री बन्ने भएका छन् । नेपाल पक्षले उनीहरुको नाम मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको हो । ओली पक्षका दुई मन्त्री दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई हटाइँदैछ ।
बंकिङ कसुर मु द्दामा खड्गसिंह खत्री मन्त्रीबाट ब र्खास्त भइसकेका छन् । मन्त्रीबाट हट्ने भएपछि दल रावलले सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेका छन् ।
यसैगरी, ओली पक्षले खुमलटारमा प्रचण्डसँग सम्पर्क गरी कर्णाली प्रदेशको सं कट रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । तत्काल मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । यसबारे प्रचण्डसँग खुमलटार गत हप्ता पुगेका ओलीका दूतहरुले पनि छलफल गरेका थिए ।
तर, प्रचण्डले माधव नेपालसँगको एकताको सन्देश दिन पनि कर्णालीमा आवश्यक कदम चालेर दिन खोजेका छन् । कर्णालीमा समिकरण बदलेर वागमती, प्रदेश १ हुँदै केन्द्रसम्म पनि बदलाव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड पक्षधरले सक्रियता बढाएको छ । रिपोर्टर्स नेपालबाट
Previous नेकपा धेरै पसिना बगाएर हासिल गरेको पार्टी हो,फुटाउने हैन जुटाउने तर्फ लागौं : प्रबक्ता श्रेष्ठ,हेर्नुहोस।
Next कसले रोक्दो रहेछ, गरिबलाई खान दिन हेरौँ भन्दै साझा पार्टीले यस्तो विज्ञप्ति निकालेर गर्यो नेकपालाई खुल्ला च्यालेन्ज ,हेर्नुहोस।
पृथ्वी’सुब्बा गुरुङ भन्छन् ,”गण्ड’कीको सरकार ढल्नुमा प्रधानमन्त्री ओ’ली जि’म्मेवार छन्”
मनाङेलाई संकेत गर्दै गुरुङले भने, ‘सबै डाँ’कूहरु वा’ल्मिकी नहुँदा रहेछन्’
“आफ्नै सांसदका कारण, बिदा हुने भए ओली, सर्वोच्च,बाट यस्तो फैसला”